Zama Amakhadi ku-Youtube Ukukhulisa Ukuzibandakanya Nezibukeli | Martech Zone
Zama Amakhadi ku-Youtube Ukwengeza Ukuzibandakanya Nezibukeli
NgoMsombuluko, Juni 8, 2015 NgoMsombuluko, Juni 8, 2015 Douglas Karr
Ngokubukwa okuningi nokuseshwa njengoba kukhona ku-YouTube, kubonakala sengathi kunethuba elilahlekile ngokungabi nezindlela ezingcono zokuguqula ezishumekwe kumavidiyo e-Youtube. I-YouTube yethule amakhadi wokuletha ukuxhumana okwengeziwe lapho umkhiqizi wevidiyo manje esengashumeka izingcingo zokuthatha isenzo esihle entweni yama-slide kumavidiyo abo. Inothi elilodwa - Amakhadi awasebenzi ngaphezu kokumbondelana kwamanje kwe-CTA okutholakala ku-Youtube.
Nasi Ukubuka konke kwamakhadi we-Youtube
Qiniseka ukuthi ucindezela inkinobho “i” ekhoneni eliphezulu kwesokudla ukuze ubone ukuthi amakhadi asebenza kanjani.
Ngoba amakhadi asebenza kungakhathalekile ukuthi kukhona umuntu osebenza kudeskithophu noma kwidivayisi ephathekayo, uma ubakhomba kumavidiyo akho, kungenzeka angahleleli ngendlela efanele. Noma kunjalo, inkinobho yolwazi iboniswa njalo ekhoneni eliphezulu kwesokudla. Lokhu kuhle - kuqinisekisa ukungaguquguquki kokuthi ngabe umuntu ubuka kusuka ku-Youtube noma kuvidiyo efakiwe esizeni kwenye indawo.
Ukukhuluma iqiniso, angiqiniseki ukuthi bangaki abantu abazophuma endleleni yabo ukuze bachofoze inkinobho, noma kunjalo. Nginomuzwa wokuthi abantu abaningi bazokukhumbula ngokuphelele. Ngicabanga ukuthi ukujwayela okungcono bekungaba nesikhathi esinqunyelwe lapho iKhadi lakho liphoqelelwe ukubukwa ukuze abantu balibone lapho isikhathi silungile. Kepha hey - kuyisici esikhangayo nesinyathelo sendlela efanele. I-YouTube ihlela ukuthuthukisa nokwenza ngcono uhlelo njengoba ibona ukuthi isetshenziswa kanjani.
Ungakhetha ezinhlotsheni eziyisithupha zamakhadi: Okuthengiswayo, Ukuxhaswa Ngezimali, Ividiyo, Uhlu lokudlalwayo, Iwebhusayithi Ehambisanayo noxhaso Lwabalandeli. Uma i-akhawunti yakho inokuma okuhle futhi ungumnikazi wokuqukethwe wevidiyo owabelana ngayo, uzothola okusha Cards ithebhu kusihleli sakho sevidiyo ukuze uzidale futhi uzihlele noma kunini.
I-Williams-Sonoma ne-VISA Checkout Kusetshenziswa Amakhadi we-Youtube
I-Visa Checkout futhi Williams-Sonoma sebethule umkhankaso wokumaketha ngokubambisana kanye nama-video ayizingxenye ezine abizwa Isikhathi Sokuthanda Ihlobo ukusekela ukutholakala kweVisa Checkout, insiza yokuphuma esheshayo nephephile ye-Visa online, ku-www.Williams-Sonoma.com.
Uchungechunge lwamavidiyo yi kungathengwa ngama-Youtube Cards - avumela ababukeli ukuthi bathenge imikhiqizo ekhonjisiwe ngokushesha futhi kalula ngokuchofoza ngqo kwividiyo-okwenza i-Visa Checkout, eno-Williams-Sonoma, omunye wemikhiqizo yokuqala ukusebenzisa ubuchwepheshe. Amavidiyo adalwe ngokubambisana ne- Tastemade, inethiwekhi yendlela yokuphila yokudla yomhlaba wonke yamapulatifomu edijithali, kanye nabathonya abakhethwe ngesandla bazohlinzeka ababukeli ngamathiphu namasu okusingatha amaqembu aphelele ehlobo.
Ngokusebenzisa i-Visa Checkout, amakhasimende aku-Williams-Sonoma aku-inthanethi angathenga konke akudingayo ukusingatha iphathi enkulu-konke ngokuchofoza nje okumbalwa.
Tags: Iwebhusayithi Ehlobeneubiza isenzoctaUxhaso lwabalandelifundraisingkhulisa ukuzibandakanya kwe-youtubeAmavidiyo WokumakethaImaketheuhlu lwadlalwayoyoutubeamakhadi we-youtubei-youtube ctaumhleli wevidiyo we-youtube
Ukugcwaliseka kwe-IDS: Izinsizakalo Zokugcina Izindlu Nezimo
Ngabe umvini wedayimane usengcupheni yezentengiselwano yomphakathi?